Shiinaha Faux Karakul (Caracul) Soo-saarista dhogorta idaha iyo Warshadda | Dharka Eastun
Faux Karakul (Caracul) dhogor idaad
Habka wax soo saarka: Faux Karakul (Caracul) dhogor idaad
Isticmaal: Dharka, guriga
Ballaaran: 58/60 ”
Baakadaha gaadiidka: bacda poly + bac-xidhka leh
micro fiber polyester leh taabasho aad u jilicsan.
isticmaal dull, is-dhalaalaya iyo fiber dhalaalaya si aad uga sameysid dhalaal dhar kala duwan ah.
jilicsan jilicsan oo jilicsan sababtoo ah sifiican u nadiifinaya.
oo leh fm dherer dherer kala duwan: 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 18mm, 20mm, 22mm ilaa maxiam 35mm.
loo isticmaalay alaabada jilicsan ee jilicsan sida dhogorta orsada, bakaylaha, libaaxa, eyga.
oo leh daabacaadda xayawaanka sida dejinta, shabeel, geri, shabeel noocyo kala duwan oo carruurtu ku ciyaarto
loo isticmaalay dharka guryaha, sida bustayaal, gogosha, dacas.
loo isticmaalay dharka dahaarka.
loo dhoofiyo suuqa Inida iyo Koonfurta Ameerika ee Brazil, Kolombiya oo leh tiro aad u badan.
1. Adeegsiga: Dharka, dahaadhka, qoorta, goynta, barkinta, rooga, tooyga, qalabka guryaha, iwm.
2. Muuqaal: Muuqaalka dhabta ah ee dhogorta iyo jilicsanaanta jilicsan, midab wanaagga soonka ee ilaalinta deegaanka u dhimanaya, xoog wanaagsan iyo tayada adeegsiga sare.
3. Waxaan beddeli karnaa culeyska iyo dhererka raso sida ku cad baaritaanka iibsadaha.
weft knitit dunnity dunn dhogor ， Midab dhalaalaya iyo midabbo badan: waxaa jira midabbo badan oo dhar dheeri ah leh, qaabab kala geddisanna looma is dul maro, taas oo si weyn u kordhineysa quruxda farshaxannimo ee dharka dheeraadka ah oo si fudud dadka uga reebaysa aragti wanaagsan. Intaa waxaa sii dheer, midabka dharka dheeriga ah waa mid adag, muddo dheer la isticmaalay ka dib, wali wuu ku dhalaali karaa midabyo dhalaalaya, qurux badan oo dhaqaaq leh.
Iftiin, dareemo jilicsan: dusha sare ee dharka dheeriga ah waxay yeelan doonaan lakab ah dhogor jilicsan, markii la salaaxo, waa mid aad u siman, oo dareenkuna waa mid aad u jilicsan.
Hore: dhogor dhogor faux
Xiga: Dhogorta dabiiciga ah ee Astrakhan
dhogorta macmalka ah ee mongolian
yeey been abuur ah iyo dhogorta eyga
adag col faux bakayle dhogorta ESTH-852-2
jar loop faux dhogorta xiirashada
Bakayle Bakeyle Bastoolad Fur
Jaakad Koolar Fur, Koodhka dhogorta leh ee haweenka leh 'Collar Fur Large', Jaakada Raga Bambaanada leh ee leh Collar Fur, Koodhka Dharka Dumarka dhogorta leh, Coat Iyadoo Koolar Fur, Koofiyadaha Fur,